The Fifth Element (1997) – Burmese Subtitle
PG-13 1997 126 min Action, Adventure, Sci-Fi
IMDB: 7.7/10 410,718 votes
BS အတှငျးရှိ ကှီး, မှီး, ညေး, မတျမတျ, ခြာတိတျ အပေါငျးတို့ Fifth Element ကို down ကွပါဗြို့
ကွညျ့ရငျး ကွညျ့ရငျးနဲ့ ကွညျ့လို့ကောငျးလာတဲ့ ခတျေလှနျဇာတျကားကောငျးလေးတဈကား ဘာသာပွနျထားတယျ။ မငျးသား Bruce Willis နဲ့ Resident Evil ထဲက မငျးသမီးလေး Milla Jovovich ပါဝငျထားတဲ့ The Fifth Element (ငါးခုမွောကျဒွပျစငျ)ပါတဲ့ ဇတျကွောငျးလေး နဲနဲခငျးပေးမယျ
– သမိုငျးအထောကျအထားတဈခုမှာ ကြောကျတုံးတှနေဲ့ Fifth element ရယျက မိစ်ဆာတှရေနျမှ ဘယျလိုကာကှယျရမယျဆိုတာကို ပရျောဖကျဆာတဈယောကျက သိရှိသှားလို့ ဘုနျးကွီးတဈပါးနဲ့ ထူးခွားတဲ့သူတှကေ ကြောကျတုံးတှကေို နရောရှရေ့ာကနေ စတာပါပဲ.
– အဲ့ဘုနျးကွီးကနေ တခွားဘုနျးကွီးတှဆေီကို ဒီဘကျခတျေလှနျအထိ လကျဆငျ့ကမျးလာခဲ့ပွီး Vito Cornelius ဘုနျးကွီးက အစိုးရကို ပွောပွခဲ့လို့ အစိုးရ နဲ့ ထူးခွားတဲ့သူတှေ တှတေ့ော့မယျ့အခြိနျမှာ မတျောတဆမှု့ ဖွဈပွီး ထူးခွားတဲ့သူတှဆေီက လကျလေးတဈဖကျပဲရလိုကျလို့ အဲ့လကျ ကိုပွနျအသကျသှငျးလိုကျတဲ့ အခါမှာ ဒနျတနျ့တနျ….
– ကြောကျတုံးကို လိုခငျြတဲ့ မိစ်ဆာ ဂွိုဟျကောငျကွီးဟာ zorg ဆိုတဲ့သူကို ဖိအားတှပေေးပွီး ရှာခိုငျးပါတယျ Zorg ကလညျး သူ့လူတှလှေတျပွီး ရှာပါတယျ မအောငျမွငျပါဘူး အဲ့တော့ သူကိုယျတိုငျရှာပါတယျ အာ့လဲမရပါဘူး (so sad)
– နောကျဆုံး ဂွိုဟျဆိုးကွီးက ကမ်ဘာကို ဖကျြစီးဖို့ လာနတေဲ့အခါမှာ မငျးသားက ကြောကျတုံးတှနေဲ့ fifth elementနဲ့ကို ဘယျလို ဘယျလို လုပျပွီး မိစ်ဆာဂွိုဟျကွီးကို နှိမျနငျးသှားမလဲဆိုတာ ကှကိုယျပဲ ကွညျ့လိုကျကွပါနျော အိုကီ
အညှနျးနဲ့ဘာသာပွနျသူကတော့ Mokhar ဘဲဖွဈပါတယျ။
BS အတွင်းရှိ ကွီး, မွီး, ညေး, မတ်မတ်, ချာတိတ် အပေါင်းတို့ Fifth Element ကို down ကြပါဗျို့
ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းနဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းလာတဲ့ ခေတ်လွန်ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကား ဘာသာပြန်ထားတယ်။ မင်းသား Bruce Willis နဲ့ Resident Evil ထဲက မင်းသမီးလေး Milla Jovovich ပါဝင်ထားတဲ့ The Fifth Element (ငါးခုမြောက်ဒြပ်စင်)ပါတဲ့ ဇတ်ကြောင်းလေး နဲနဲခင်းပေးမယ်
– သမိုင်းအထောက်အထားတစ်ခုမှာ ကျောက်တုံးတွေနဲ့ Fifth element ရယ်က မိစ္ဆာတွေရန်မှ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာကို ပရော်ဖက်ဆာတစ်ယောက်က သိရှိသွားလို့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ ထူးခြားတဲ့သူတွေက ကျောက်တုံးတွေကို နေရာရွှေ့ရာကနေ စတာပါပဲ.
– အဲ့ဘုန်းကြီးကနေ တခြားဘုန်းကြီးတွေဆီကို ဒီဘက်ခေတ်လွန်အထိ လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့ပြီး Vito Cornelius ဘုန်းကြီးက အစိုးရကို ပြောပြခဲ့လို့ အစိုးရ နဲ့ ထူးခြားတဲ့သူတွေ တွေ့တော့မယ့်အချိန်မှာ မတော်တဆမှု့ ဖြစ်ပြီး ထူးခြားတဲ့သူတွေဆီက လက်လေးတစ်ဖက်ပဲရလိုက်လို့ အဲ့လက် ကိုပြန်အသက်သွင်းလိုက်တဲ့ အခါမှာ ဒန်တန့်တန်….
– ကျောက်တုံးကို လိုချင်တဲ့ မိစ္ဆာ ဂြိုဟ်ကောင်ကြီးဟာ zorg ဆိုတဲ့သူကို ဖိအားတွေပေးပြီး ရှာခိုင်းပါတယ် Zorg ကလည်း သူ့လူတွေလွှတ်ပြီး ရှာပါတယ် မအောင်မြင်ပါဘူး အဲ့တော့ သူကိုယ်တိုင်ရှာပါတယ် အာ့လဲမရပါဘူး (so sad)
– နောက်ဆုံး ဂြိုဟ်ဆိုးကြီးက ကမ္ဘာကို ဖျက်စီးဖို့ လာနေတဲ့အခါမှာ မင်းသားက ကျောက်တုံးတွေနဲ့ fifth elementနဲ့ကို ဘယ်လို ဘယ်လို လုပ်ပြီး မိစ္ဆာဂြိုဟ်ကြီးကို နှိမ်နင်းသွားမလဲဆိုတာ ကွကိုယ်ပဲ ကြည့်လိုက်ကြပါနော် အိုကီ
Option 1 drive.google.com 1.96 GB 1080p
Option2mega.nz 1.96 GB 1080p
Option3onedrive.live.com 1.96 GB 1080p
Option4mediafire.com 1.96 GB 1080p